गगन थापालाई टक्कर दिन आउने को हुन् २६ बर्षकी सुबुना::Pathivara News
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो १५१ कर्मचारी एमालेमाथि यस्ता आरोप लगाउँदै धनकुमारीले गरीन् पार्टी परित्यागको घोषणा अन्योलमा मन्त्रालयका सचिवहरू ! मदन भण्डारी र दरबार हत्याकाण्डजस्ता घटना हुन सक्छन् : प्रचण्ड सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन कांग्रेसको कार्यदल गठन
गगन थापालाई टक्कर दिन आउने को हुन् २६ बर्षकी सुबुना
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ४ मा सुबुना बस्नेतलाई अघि सारेको छ । यो क्षेत्रमा कांग्रेसका गगन थापा र एमालेका राजन भट्टराई उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद गगनले प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारे आफू तयार रहेको बताएका थिए । तर, पार्टीले ठोस निर्णय नगरेपछि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावको तयारीमा होमिएका छन् ।
थापाको क्षेत्रमा अब विवेकशील साझा पार्टीबाट सुबुना पनि चुनावी दौडमा होमिएकी छन् ।
को हुन् सुबुना ?
इलाममा जन्मिएकी सुबुना २६ वर्षकी भइन् । उनी राजनीति होमिएको भने चार वर्ष भयो । विवेकशील नेपाल मञ्चको सदस्य हुँदै पार्टी केन्द्रीय सदस्य भएकी उनी एमबीए अध्ययनरत छिन् ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको अभियानका क्रममा पनि उनले सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएकी थिइन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव लड्ने निर्णय आफ्नो र पार्टी दुबैको भएको उनले बताइन् ।
काठमाडौं ४ मा अन्य क्षेत्रहरु जस्तै सडक, खानेपानी जस्ता समस्या रहेको भन्दै उनले भने, ‘मैले कसैका विरुद्ध भन्दा पनि समस्यासँग जुध्न चुनाव लड्न लागेको हुँ ।’
हालै भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्ने महानगरपालिकाको दुईवटा वडामा विकेकशील पार्टीले उम्मेवारी दिएको थियो । उनीहरुसँग छलफल थालेको र छिट्टै चुनावी अभियान अघि बढाउने उनले बताइन् ।
सोमवार, अशोज २३, २०७४ मा प्रकाशित
शैक्षिक कार्यक्रममा ओलीले English मा भाषण गर्दा विदेशी चकित (भिडियो)सहित
प्रचण्ड नेतृत्वमा दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणकाे अारम्भ
प्रचण्ड बन्ने भए राष्ट्रपति ओली र प्रचण्ड बीच यस्तो सहमति ?
लालबाबु मन्त्री भएपछि भने कांग्रेसले हारेको तोडमा देउवाले थुप्रै गलत निर्णय गरे (भिडियो)सहित
काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न तहका लागि १५१ जना कर्मचारी माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले प्रशासन तर्फ १४१...
कांग्रेसभित्र मारामार, आरजुलाई महामन्त्री बनाउन देउवाले बनाए यस्तो प्लान